कर कार्यालयले देखाउने 'मिसम्याच'बाट मिचिँदैछन् करदाता, यस्तो छ बच्ने उपाय, सि.ए. दाहालका सुझाव :: BIZMANDU
कर कार्यालयले देखाउने 'मिसम्याच'बाट मिचिँदैछन् करदाता, यस्तो छ बच्ने उपाय, सि.ए. दाहालका सुझाव
-शेष मणि दाहाल
प्रकाशित मिति: Feb 16, 2017 10:04 PM
आय विवरण पेश गरिसकेपछि धेरै करदाताको साझा समस्या बनेको छ- मिसम्याच। धेरै करदाताको हिसावकिताबमा कर कार्यालयले मिसम्याच फेला पार्ने र त्यही आधारमा थप कर तथा जरिवाना लगाईँदै आएको छ। अधिकांश करदाताको टाउको दुखाएको मिसम्याचका कारण र समाधानका उपाय बारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
के हो मिसम्याच?
आयविवरणको अनुसुची १३ मा भरेको र तपाईसँग कारोबार गर्ने (बिक्रेता, क्रेता, साहु, आसामी) ले बुझाएको विवरण फरक परेमा त्यसलाई मिसम्याच भनिन्छ। अनुसुची १३ मा तपाईंले बार्षिक एक लाखभन्दा (एकै वा पटक/पटक गरी) रुपैयाँ भन्दा बढि कारोबार (खरिद वा बिक्री) गरेका पार्टी र बर्षान्तमा कसैसँग लाख रुपैयाँभन्दा बढि लिनु वा दिनु भएमा सो विवरण भर्नुपर्दछ। कारोबार गरेकादुबै पक्षले पेश गरेको विवरण एउटै नभएमा, त्यसलाई मिसम्याचमा परेको भनिन्छ।
मिसम्याचले कर दायित्व सिर्जना गर्छ?
मिसम्याचले कर दायित्व सिर्जना गर्छ नै भन्ने हुदैन। तर, कर कार्यालयले तपाईंले पेश गरेको विवरण सहि छ कि छैन भनेर छुट्याउन प्रयोग गर्ने मुख्य अस्त्र मिसम्याच नै हो। जस्तो तपाईंले कुनै पार्टीबाट बर्ष भरिमा दशलाख रुपैयाँ बराबरको खरिद गरेको विवरण अनुसुची १३ भर्नुभयो। तर, उक्त पार्टीले तपाईंलाई त्यस अनुरुप बिक्रि गरे भनेर विवरण नदेखाएमा मिसम्याच हुन जान्छ।
मिसम्याचबाट कसरी बच्ने?
मिसम्याचबाट बच्न तपाईंले आर्थिक बर्ष सकिएपछि सबै पार्टीबाट कारोबारको समर्थन पत्र (कन्फरमेसन लेटर) लिन सक्नुहुन्छ। जसबाट तपाईंले बितेको बर्ष हरेक पार्टीसँग कतिको कारोबार भयो र बर्षान्तमा लिनु/दिनु कति छ भन्ने विवरण अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा तपाईंले आफ्नो कारोबारमाकुनै हिसाब राख्न गल्ति भए सच्याउन समेत सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनुसुची १३ भर्दा सोहि सच्चाएको विवरण हाले मिसम्याच पर्ने सम्भावना एकदमै न्युनहुन्छ।
पार्टीसँगको कारोबार रकम कसरी सजिलै पत्तालगाउने?
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहाल ट्याक्सपर्टका सल्लाहकार हुन्।)